A New Cryptocurrency Just akabuda, Ndizvo sezvo Bold sezvo Bitcoin - Tray News - Blockchain News
Kukadzi 20, 2018 arun
A New Cryptocurrency Just akabuda, Ndizvo sezvo Bold sezvo Bitcoin
Bitcoin kwakatangwa panogasa mari dambudziko 2008 serimwe rinogona kutsiva aivapo mari ezvinhu dzinodzorwa nehurumende uye ezvokutengeserana mabhanga. ikozvino, gumi gare gare, Bitcoin ndiye nhau guru uye hurumende iri nezvekutanga munhu cryptocurrency wayo serimwe rinogona kutsiva yayo yaivapo mari hurongwa.
Hurumende Venezuela yakatanga vakararama kutengeswa kwayo National cryptocurrency, asi Petro, pamutemo musi weChipiri. Chiratidzo Ethereum anotsanangura achava akafanana nevamwe ERC20 vakawanda zviratidzo kumhanya pamusoro Ethereum pomumbure kuti vakatanga Via hyped kutanga yesimbi zvipiriso (ICOs) ichangopfuura mwedzi.
Asi President Nicolas Maduro vanoti Petro achapiwa kunotsigirwa reserves mafuta rwacho, kutaura kuti kwakaita nevatsoropodzi kuti hwakanga rudzi chikwereti National kupfuura mari uye vazviona akazivisa pamutemo ne Venezuela raMwari Congress.
Zviri zvakakwana gakava kuti debut kuti Petro anenge vakashinga sezvo yepakutanga kushanda Bitcoin pachayo.
zvisinei, ushingi oga hachisi kukwana hunovimbisa kubudirira. Zvino iyi, kuti Petro inoratidzika kuva akashinga mari tora sedzimwe dzakawanda sketchy ICOs kubva nokutarisira kuti yapera upfumi hwayo muvhu.
«Hapana chikonzero nei ndaisagona investor anofanira kuisa mari mariri,»Anoti Daniele Bianchi, purofesa mari kuWarwick Business School uyo researches cryptocurrencies. «The nyika unorwa quadruple digit mitengo pamwe oiri ichakasangana nezvimwewo pasi pamusoro 29 muzana 2017. Venezuela ari arguably defaulting pamusoro zvikwereti zvayo, uye kana zvechokwadi munhu anotenda kuti iyi inongova kukonzerwa kunze zvirango zvemari, hapana chikonzero nei ichi vasingagoni kuitika kuna Petro uyewo. »
The Petro zvinowanzodavirwa kuonekwa senzira circumvent U.S. uye European zvirango pamusoro nyika, iro rave wracked ne hyperinflation uye mhosva uori.
Bianchi anotaura kuti zvinomirira guru ICO nokusingaperi dzichitaurwa, vane tariro rokurera $5 bhiriyoni, izvo zvaizoita kumiririra kumativi 5 muzana Ethereum zvose wechiGeorgian kana kuti chivharo zvasvika.
«The Petro kuedza zvechokwadi anomirira chimwe chinhu chakaitika ICO zvose. zvisinei, kwakaita ikozvino kanenge, rinotsvaka zvakawanda kuedza kurera mari kubva Vapererwa pane kuedza chaiyo kuzodzosera yokusuma digital mari kunotsigirwa zvakaoma chinokosha. »
Kufanana Ndakadzidza zvakawanda kuedza nesayenzi kuchikoro, Murairo thumbs zvakanaka anogona kushandisa pano: tsvaka, asi regai kubata.
By Eric Mack Inc.com
Bitcoin price to $100,000 kubudikidza 2...
Chii Cryptocurrency To Tenga ...
svondo rino takurukura chii akundinamata ...
Previous Post:The itsva shanduro Bitcoin Core rinonyatsotsigirawo SegWit-kero
Next Post:The Blockchain-rakapiwa R3 anosika ane muzinda dzidzo kuti magweta.
Chivabvu 31, 2018 pa 10:20 PM